The Institute for Political and Civic Engagement(iPace)-Student Applications for Term 2, 2017 | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
The Institute for Political and Civic Engagement(iPace)-Student Applications for Term 2, 2017
Posted on April 8, 2017 by MYEO in scholarship, Training //0Comments
Deadline : 30, April,2017
Location : American Center, Yangon
Duration : 22, May, 2017 – 30, June,2017
Institute for Political and Civic Engagement (iPACE)သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ အလုပ်သမား လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အရပ်ဖက် လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများတငွ် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသော ခေါင်းဆောင်များကို သင်တန်းများ ပို့ချခြင်းအားဖြင့် ထောက်ပံပေးပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းများသည် ဒီမိုကရေစီ၏ အခြေခံသဘော တရားများနှင့်ဆိုင်သော အသိပညာများနှင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများ တိုးတက်စေရန်နှင့် ပြည်သူများကို ပိုမို ကိုယ်စားပြုပြီး ပိုမိုတာဝန်ခံနိုင်သော အစိုးရ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူများ၏ပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။အမေရိကန်စင်တာ အခြေစိုက် iPACE သင်တန်းကျောင်းမှ ဖွင့်လှစ်မည့် (၂၀၁၇) ခုနှစ် သင်တန်းအပတ်စဉ် (၂)၏ လျှောက်လွှာများကို စတင်လက်ခံနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။
အပတ်စဉ် (၂) (၂၀၁၇) တွင်ပါဝင်သည့် သင်တန်းများမှာ
1. Foundations for Community Development
2. Advocacy for Ending Gender-Based Violence
4. Advocacy in Democracy
5. Federalism and
6. Pluralism and Governance တုို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အလုပ်သမားအရေး လှုပ်ရှားသူများ (သို့မဟုတ်) အရပ်ဖက် လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ (Non- governmental organizations or civil society organizations) တွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားသူများ မည်သူမဆို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ International NGOs များမှ ၀န်ထမ်းများ လျှောက်ထားခွင့် မပြုပါ။ iPACE Program မှ သင်တန်းများတွင် သင်ယူခဲ့ရသည်များကို မိမိတို့အလုပ်၊ အဖွဲ့အစည်းများတငွ် ပြန်လည်၍ လက်တွေ့ အသုံးချမည့် သင်တန်းသားများကို ပိုမိုအလိုရှိသည်။
သင်တန်းကြေးပေးရန် မလိုပါ။ရန်ကုန်တိုင်း ပြင်ပမှ (သင်တန်းတက်ရောက်ရန် သက်သက် ရည်ရွယ်၍) လာသော သင်တန်းသား/ သူများသာ သင်တန်းမှ သတ်မှတ်ထားသော ပညာသင်ဆုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားသူသည် ရန်ကုန်တိုင်း ပြင်ပတွင် အမှန်တကယ် နေထိုင်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ရမည်။ (ဦးရေ အကန်အသတ် ရှိပါသည်။ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားသူအားလုံး ပညာသင်ဆု ရမည် မဟုတ်ပါ။)
လျှောက်လွှာများ (hard copy) ကုို အမေရိကန်စင်တာ၏ လုံခြုံရေးဂိတ်တွင် ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ (Soft copy) ကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူနုိုင်ပါသည်။
သင်၏ အချက်အလက်ပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာ (Hardcopy) ကို American Center ၏ လုံခြုံရေး အဆောင်တွင်းရှိ “iPACE Applications Box” တွင် ထည့်၍ သော်လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) လျှောက်လွှာ (softcopy) ကို [email protected] သို့ အီးမေလ်းပို့၍ သော်လည်းကောင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာကို မြန်မာ (သို့မဟုတ်) အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသား ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိလိုသမျှကို [email protected] အီးမေလ်းပို့၍ စုံစမ်းနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) iPACE ၏ Facebook စာမျက်နှာ https://www.facebook.com/ipace.myanmar သို့ ၀င်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။